Moahu Yehowa kɛseyɛ (1-7)
Bɔhyɛ Asaase no (8-12)
Osetie ho akatua (13-17)
Momfa Onyankopɔn nsɛm nsie mo komam (18-25)
“Nhyira ne nnome” (26-32)
11 “Monnɔ Yehowa mo Nyankopɔn+ na muntie no, na munni n’ahyɛde, n’atemmusɛm, ne ne mmara so daa. 2 Munim sɛ ɛnnɛ, ɛnyɛ mo mma na me ne wɔn rekasa. Wɔn de, wonnim na wɔanhu Yehowa mo Nyankopɔn nteɛso,+ ne kɛseyɛ,+ ne nsa a ɛyɛ den,+ ne ne basa a wateɛ mu no. 3 Wɔanhu nsɛnkyerɛnne ne anwonwade a ɔyɛe wɔ Egypt, ne nea ɔde yɛɛ Egypt hene Farao ne ne man nyinaa no.+ 4 Bere a Egypt asraafo ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam retiw mo na Yehowa maa Ɛpo Kɔkɔɔ no bu faa wɔn so, na ɔsɛee wɔn korakora no, ɛno nso mo mma no anhu.+ 5 Nea ɔyɛ maa mo wɔ sare no so kosii sɛ mubeduu ha no, wɔanhu bi. 6 Afei nso, bere a ɔmaa asaase mu paee na ɛmenee Ruben ba Eliab mma Datan ne Abiram ne wɔn afi ne wɔn ntamadan ne biribiara anaa obiara a odi wɔn akyi wɔ Israelfo nyinaa anim no, wɔanhu.+ 7 Mo na mode mo ani huu anwonwade akɛse a Yehowa yɛe no nyinaa. 8 “Monhwɛ nni mmara a mede rema mo nnɛ yi nyinaa so na ama mo ho ayɛ den, na moatwa akɔfa asaase no. 9 Eyi bɛma moanyin akyɛ+ wɔ asaase a Yehowa kaa ntam kyerɛɛ mo agyanom sɛ ɔde bɛma wɔne wɔn asefo*+ no so, asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so no.+ 10 “Asaase a morekɔ akɔfa no nte sɛ Egypt asaase a mufi so bae no. Ɛhɔ de, mudua ade a, na mode mo nan na egugu so nsu* te sɛ mfikyifuw. 11 Nanso asaase a moretwa akɔfa yi yɛ mmepɔw ne abon+ asaase a ɛnom nyankonsu.+ 12 Ɛyɛ asaase a Yehowa mo Nyankopɔn hwɛ so. Yehowa mo Nyankopɔn ani ku ho fi afe mfiase kosi afe awiei. 13 “Sɛ mutie ahyɛde a mede rema mo nnɛ yi na modɔ Yehowa mo Nyankopɔn de mo koma nyinaa ne mo kra* nyinaa som no a,+ 14 ɛnde me nso mɛtɔ osu agu mo asaase so wɔ ne bere mu, osutɔbere mu osu* ne fefɛw bere mu osu.* Na mobɛboaboa mo hwiit* ne mo bobesa foforo ne mo ngo ano.+ 15 Na mɛma mo nyɛmmoa anya sare awe wɔ mo asaase so na mo nso moadidi amee.+ 16 Monhwɛ yiye na biribiara antwetwe mo koma amma moankɔsom anyame foforo ankotow wɔn.+ 17 Sɛ moyɛ saa a, Yehowa bo befuw mo denneennen, na ɔbɛto ɔsoro mu na osu rentɔ,+ na asaase remmɔ aduan, na ɛrenni da bi na mo ase ahyew afi asaase pa a Yehowa de ama mo no so.+ 18 “Momfa me nsɛm yi nsie mo koma ne mo kra* mu, na momfa nkyekyere mo nsa na akae mo, na momfa nyɛ ade a mode bɔ mo moma so.*+ 19 Momfa nkyerɛkyerɛ mo mma na monka ho asɛm bere a mote fie, bere a monam kwan so, bere a moda hɔ, ne bere a moasɔre.+ 20 Monkyerɛw ngu mo fi apongua ne mo aponkɛse ho, 21 na ama mo ne mo mma atena ase akyɛ+ wɔ asaase a Yehowa kaa ntam kyerɛɛ mo agyanom sɛ ɔde bɛma wɔn no so,+ bere tenten a ɔsoro kata asaase so yi. 22 “Sɛ mutie mmara a mede rema mo yi nyinaa na mudi so, na modɔ Yehowa mo Nyankopɔn+ nantew n’akwan nyinaa so, na mobata ne ho+ a, 23 Yehowa nso bɛpam aman yi nyinaa afi mo anim,+ na moafa aman akɛse a wɔdɔɔso sen mo no asaase atena so.+ 24 Baabi a mo nan betia biara bɛyɛ mo dea.+ Efi sare no so kosi Lebanon, efi Asubɔnten no, Asubɔnten Eufrate ho kosi atɔe fam po* no ano nyinaa bɛyɛ mo asaase.+ 25 Obiara rentumi nnyina mo anim.+ Asaase a mobɛfa so no nyinaa, Yehowa mo Nyankopɔn bɛma mo ho hu atɔ wɔn so na wɔasuro mo+ sɛnea ɔhyɛɛ mo bɔ no. 26 “Monhwɛ, ɛnnɛ mede nhyira ne nnome resi mo anim:+ 27 Sɛ mutie Yehowa mo Nyankopɔn mmara a mede rema mo nnɛ yi a, mo nsa bɛka nhyira no.+ 28 Na nnome no nso, sɛ moantie Yehowa mo Nyankopɔn ahyɛde+ na moman fi ɔkwan a merekyerɛ mo nnɛ yi so kodi anyame foforo a munnim wɔn akyi a, ɛnde ɛbɛba mo so. 29 “Sɛ Yehowa mo Nyankopɔn de mo du asaase a morekɔfa no so a, Gerisim Bepɔw so na monka Onyankopɔn nhyira no, na monka ne nnome no wɔ Ebal Bepɔw so.+ 30 Sɛ mutwa kɔ Yordan atɔe fam a, mmepɔw no wɔ Kaananfo a wɔte Araba no asaase so. Ɛhɔ bɛn More nnua akɛse a ɛwɔ Gilgal anim no.+ 31 Moretwa Yordan akɔfa asaase a Yehowa mo Nyankopɔn de rema mo no.+ Sɛ mo nsa ka asaase no na motena so a, 32 monhwɛ nni ahyɛde ne atemmusɛm a mereka ho asɛm akyerɛ mo nnɛ yi nyinaa so.+
^ Nt., “wɔn aba.”
^ Kyerɛ sɛ, ntwahonan a wɔde wɔn nan tia so ma etwa ne ho. Wɔyɛ saa de twe nsu anaa wɔde pae aka anaa wɔde buebue aka mu.
^ Nt., “mo aniwa ntam.”